Fironana marketing dizitaly | Martech Zone
Fironana marketing dizitaly
Alarobia, Febroary 6, 2019 Alarobia, Febroary 6, 2019 Douglas Karr
Ity dia famintinana lehibe momba ny fironana maro izay efa nivezivezy niaraka tamin'ny mpanjifantsika - fikarohana biolojika, fikarohana eo an-toerana, karoka finday, marketing amin'ny horonan-tsary, marketing amin'ny mailaka, doka misy karama, taranaka mitarika, ary content marketing fironana lehibe.
Truism tena lehibe izany fa mila ampidirina amin'ny statistikan'ny varotra nomerika farany sy ny fironana mafana indrindra ho an'ny paikadim-barotra nomerika hananana fahombiazana amin'ny taona 2019 sy ny sisa. Fironana 7 ambony tokony ho fantatrao amin'ny fampielezana dizitaly mahomby manana antontan'isa marketing izay mety hiasa ho torohevitra mahasoa mivantana hanamafisana ny fampielezan-kevitrao amin'ny varotra, ao anatin'izany ny fanapahana ny halavany mety ho an'ny lahatsoratra sy mailakao amin'ny bilaogy na ny fanaovana ny tetika SEO mahomby kokoa.
Ity antsipiriany infographic tsy mampino ity dia amin'ny an-tsipiriany izay rehetra tokony hoeritreretin'ny fikambanana tsirairay rehefa mamolavola ny paikadim-barotra nomerika sy manao fanentanana hanohitra izany izy ireo. ao anatin'izany:
Search Engine Optimization (SEO) - Ity no singa tokana manan-danja indrindra amin'ny orinasa rehetra satria mikasa fikasana mitovy. Raha mitady vokatra na serivisy an-tserasera aho dia vonona ny hividy. Manoloana izany, 57% amin'ireo mpivarotra B2B no nilaza fa ny laharam-pahamehana dia mitarika fitarihana betsaka kokoa noho ny hetsika marketing hafa.
Fanatsarana ny motera fikarohana eo an-toerana (SEO eo an-toerana) - Raha orinasa eo an-toerana ianao, dia zava-dehibe ny fahitana anao amin'ny fonosan'ny Google map - 72% amin'ireo mpanjifa nanao fikarohana teo an-toerana no nitsidika fivarotana iray tao anatin'ny 5 kilaometatra. Google My Business dia fantatra amin'ny anarana hoe anao tranonkala faharoa.
Fikarohana finday - Ny antsasaky ny firenena dia manamarina ny findainy alohan'ny hialany eo am-pandriana ary 48% amin'ny mpanjifa rehetra no manomboka ny fikarohana finday amin'ny fikarohana ao amin'ny fitaovany. Mitombo hatrany ny fandaniana doka amin'ny finday - tombanana ho $ 20 miliara mahery.
Social Media Marketing - Miasa tsara ny fanentanana sy ny fanamafisana ara-organika ary na amin'ny doka misy karama aza ao amin'ny Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ary LinkedIn. Tsy izany ihany fa manana tombony hananganana vondrom-piarahamonin'izy ireo manokana ireo marika ary tena hirotsaka amin'ny sehatra manokana miaraka amin'ireo foko misy azy ireo.
Video Marketing - Tsy manana mpanjifa tokana aho izay tsy ampiasako karazana paikady video. Manangana studio video ho an'ny mpanjifa iray aho ho an'ny horonantsary ara-tsosialy tena izy, manana horonantsary mihetsiketsika miorina amin'ny tranokalan'ny mpanjifa hafa aho, vao avy namoaka horonantsary manazava animated ho an'ny mpanjifa hafa aho, ary mamokatra vokatra izahay horonantsary tantara ho an'ny mpanjifa hafa. Mora ny vidéo ary tsy olana intsony ny bandwidth rehefa tonga any amin'ny mpihaino anao. 43% ny olona te-hahita atiny video bebe kokoa avy amin'ny mpivarotra!
mailaka Marketing - Ny mailaka mangatsiaka dia mitohy hatrany amin'ny fanentanana sy ny fahafahan'ny ekipa mpivarotra. Ny fizarana sy ny maha-izy azy dia mitohy mahazo tahan-tsokatra misokatra sy tsindry bebe kokoa. 80% amin'ireo mpampiasa mailaka no mahazo kaonty mailaka amin'ny findainy, noho izany dia ilaina ny famolavolana valiny amin'ny finday.
Doka misy karama - rehefa mihabetsaka ny fantsona sy ny fomba, ary ny fianarana ny milina sy ny faharanitan-tsaina artifisialy manatsara ny fametrahana ary mampihena ny vidiny, ny dokambarotra karama dia nanjary nahomby kokoa noho ny tamin'ny lasa. Ny fikarohana karama, ny atiny ara-tsosialy, tohana, dokam-barotra an-tsary, ary safidy iray taonina hafa dia misy any hanararaotan'ireo orinasa.
Lead Generation - Ny fananganana fangatahana miaraka amin'ireo pejin'ny sidina nohamafisin'ny fiovam-po sy ny fitarihana fitarihana mankany amin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana voarindra, mandeha ho azy ary kendrena dia lasa iray amin'ireo paikady marketing nomerika mahomby indrindra tao anatin'ny folo taona.
Content Marketing - ny mpanjifa sy ny orinasa dia samy manohy mitarika ny tenany ary mikaroka ny fividianana azy ireo an-tserasera manaraka. Miaraka amin'ny tabataba be any, ny orinasa dia terena hampiasa fotoana sy hery bebe kokoa amin'ny fananganana atiny izay mitondra valiny tokoa, saingy rehefa manao izany izy ireo, dia fomba mahomby sy mora entina hisarihana ny mpanjifa.
Ity ny infographic feno, fanamafisana lehibe ny fitomboana sy ny paikady tokony hapetraky ny orinasanao:
Tags: -mpamoronaContent Marketingmpanoratra googledokam-barotra findayfinday-barotraSocial Media Marketing
Fironana efatra amin'ny varotra E-varotra tokony horaisinao
Ahoana ny fomba hamoronana paikady marketing Facebook eo an-toerana mahomby
Marketing amin'ny triatra
May 22, 2013 amin'ny 3: 34 AM
Tsara tarehy infographic! Misaotra nizara taminay.
May 22, 2013 amin'ny 6: 43 AM
Asa tsara, Doug. Tsy mora ny mampiditra ireo fironana tato ho ato ireo sy angon-drakitra manohana ao anaty sary fohy. Misaotra!
May 23, 2013 amin'ny 8: 33 AM
Ity dia infographic tena tsara. Saingy tsy faminaniana ho an'ny 2012 ve ireo zavatra tena ireo? Ny tiako holazaina amin'ny marketing amin'ny finday, marketing amin'ny atiny, media sosialy - afa-tsy ny laharan'ny mpanoratra.
May 23, 2013 amin'ny 9: 21 AM
Nalefa tao amin'ny Mailbox ho an'ny iPhone